FAAH FAAHIN:-waxaa Soo Dhamaaday Qaybtii Hore Ee Kulanka Tottenham 2-0 Arsenal
HomeHoryaalka IngiriiskaFAAH FAAHIN:-waxaa soo dhamaaday qaybtii hore ee Kulanka Tottenham 2-0 Arsenal
December 7, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Kooxda Tottenham ayaa labo gool la timaaday qaybtii hore ee ciyaarta, waxaana goolasha u dhaliyey Son iyo Kane.
Dhanka Arsenal lama dhihi karo waa liidata oo wax ay sameesay dhowr iskuday laakiin daafacyada kooxda Tottenham ayaa ka hor istaagay.
Weeraryahanada Arsenal ayaa laga dareemaa in ay isku xirneyn halka Tottenham weerarkeeda aad isku xiryahan oo markii kubadda kusoo weerarayeen halis weyn galina kooxda Arsenal difaaceeda.
Dhanka ugu badan ee kooxda Arsenal laga weeraraa waa boos Héctor Bellerín, waxaana saaran weeraryahan Son.
Dhankake Willian ayaa la dareemaa in weerarkiisa liito waxa oo u baahan yahay bedel halka Thomas Partey oo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan intii ay socotay qaybta hore ee ciyaarta.
Arsenal waxa ay ubaahan tahay dhismo weyn sida oo horay u sheegay macalinka hada hogaanka u haaya kooxda, waxaana ay noqon doontaa kooxda ugu adeega badan Suuqa kala iibsiga bisha Janaayo dhanka kooxaha Premier League.
TAAGEERYAASHA axaa sugayaan hal hayskii ahaay ciyaar waa galin danbe reer burco inkastoo kooxda Jose tahay naadi adag oo doonee in markale la wareegto hogaaminta horyaalka Premier League.